Ny programa tsara indrindra hanovana ny JPG ho ICO sy tranokala mitovy | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, sary Masina
Ireo programa ho an'ny ny fanovana sary JPG ho ICO dia hanamora ny fiainantsika mankany amin'ilay endrika sary tsy dia fantatra loatra amin'ny voalohany, fa izay ampiasaina amin'ny tontolon'ny IT izay tokony hamoronana sary iray na maromaro manana habe sy halalin-loko isan-karazany; raha atao teny hafa, ireo mpamorona lozisialy ireo dia mitady endrika sary hafa natokana ho an'ny karazana famokarany.
Anisan'ireo fandaharana azo atao hanovana sary JPEG ho endrika ICO hitantsika fa be dia be ny fampiharana tranonkala izany dia hanompo antsika tonga lafatra amin'ny tanjona iray ihany. Ny zavatra tsara indrindra dia ny hamonjentsika ny fametrahana programa (na dia misy app tonga lafatra aza apetrakao izay tsy azonao adino) ary mila manana rohy mifanaraka amin'ny adiresy an-tserasera sasany amin'ireo tranonkala ihany izahay. handeha hampianatra isika.
1 Avadiho amin'ny endrika ICO ny Sarinao
4 Online Hanova Maimaimpoana
5 Niova fo
7 Fandaharam-pianarana Windows: Converter PNG maimaimpoana ho an'ny ICO
Avadiho amin'ny endrika ICO ny Sarinao
Ity tranonkala an-tserasera ity dia iray ahafahantsika mahita karazana fiovam-po be dia be amin'ny karazana endrika rehetra mifandraika amin'ny sary. Raha ny marina dia voafaritra tsara ny anarany ka tsy gaga izahay fa afaka mamadika ireo endrika toa ny PNG, JPG ary ICO, izay tadiavinay ireo.
Tsy toy ireo safidy hafa ampahafantarinay anao, maimaim-poana ity iray ity, noho izany dia tsy mila mamaky ilay boaty ianao raha te hiditra amin'ny fiovan'ny sary amin'ny endrika JPEG ho ICO. Ny iray amin'ireo asongadin'ity tranonkala ity dia izany ny interface tsara dia tsotra, izay manampy amin'ny fizotry ny fiovam-po ka tsy hifangaro ao mihitsy isika.
Ilay tokana izay eny, mila misoratra anarana ianao hahafahanao miditra amin'ireo hatsaram-panahy sy tombony azony, mihoatra ny ampy hanaovana ny data-ntsika ho fialantsiny. Amin'ny tenany dia tranokala tsara hanovana sary kely tsy mila filàna maro. Mazava ho azy fa manana dokam-barotra mahazatra izy io, noho izany mifantoha tsara amin'ilay sary notifirina ary mankanesa any am-baravarankely izay ahafahantsika mandatsaka ireo rakitra na tsindrio fotsiny ny bokotra mba hampidirana ny sary izay tiantsika ovaina avy any JPEG mankany ICO.
Avadiho ny sarinao - WEB
Avy amin'ity tranonkala ity dia afaka milaza isika fa izy no mpanova sary JPG tsara indrindra amin'ny Internet mankany amin'ny format ICO avy amin'ny lisitra. Ny lesoka tokana, ary indrindra rehefa mitady tsy handoa denaria iray isika, dia eo ambanin'ny famandrihana isam-bolana hahafahana miditra amin'ireo hatsarany sy tombontsoa azo avy aminy.
Mazava ho azy, hankafy andiana toetra tsy azo tsinontsinoavina ianao, ary ireo izay mitady ny vahaolana mitovy amin'izany dia hankasitraka ary ilain'izy ireo isan'andro isan'andro, toy ny fitaovana marobe azo amboarina, hasiana, hamoha, manambatra ary mamolavola rakitra PDF mihitsy aza.
Ary eto isika dia afaka manadino ireo fetra mety hananan'ny ambiny, satria tsy manana fetra habe izahay mampakatra ny fisie ary afaka manao ny fiovam-po rehetra tadiavinay tsy misy olana izahay. Raha atotaly dia manolotra fitaovana maherin'ny 50 isan-karazany izy, fanohanana ny endrika sary rehetra, kinova amin'ny birao misy, ary ny encryption ambanin'ny SLL ho fiarovana azo antoka.
Una vahaolana fandoavam-bola izay raha ampitahaintsika amin'ny fifaninanana Satria programa hanovana ny sary JPG ho ICO izy ireo, dia mora vidy kokoa, noho izany aza mahatsiaro ho voatazona ny vidiny raha mampitahantsika izany amin'ny safidiny malalaka. Eto izahay dia afaka mampiasa ny fitaovanao amin'ny fotoana mety. 6 dolara isam-bolana ny vidiny, ka andramo.
Tsy mitovy io vahaolana amin'ny tranonkala io satria tsy mangataka ny hisoratra anarana mba hampiasa ny asany amin'ny famadihana ireo sary JPEG amin'ny endrika ICO. Ka ny mahasamihafa ny iray amin'ireo safidy teo aloha ananantsika momba io karazana fiovam-po io. Raha atao teny hafa, dia hadinontsika ny misoratra anarana hanova sary.
Anisan'ireo hatsarany misy ihany koa ny fahafaha-miova fo amin'ny Internet ny karazana endrika sary rehetra ankoatry ny ICO ho tanjona omena amin'ity lahatsoratra ity. Tsy afa-miala amin'ny ankamaroan'ny traikefa nomen'ireo ambin'ireo tranonkala an-tserasera amin'ny lisitra arosonay izy ireo, satria manararaotra ny fizarana izy ireo mba hahafahanao mampita endrika PNG ka hatramin'ny JPG na ny mifamadika amin'izany.
Ary na dia maimaim-poana aza, tsy mamela ny fanodinam-bolan'ny sary JPG ka hatramin'ny ICO, ka amin'ity tranga ity dia mahita fahasembanana kely isika na dia takatra amin'ny tsy fandoavana denaria iray aza ny vahaolana. Azontsika atao ny mampiasa ny tranonkala hanatanterahana ny hetsika famadihana rakitra toy ny manana kinova ahafahana miroso amin'ny fanovana ny sary JPG ho ICO.
Una vahaolana mahaliana izay tsy mangataka anay mailaka hanova sary, noho izany dia tsy maintsy raisinao izany alohan'ny handoavana ny fandoavam-bola hafa izay saika manahaka ny fahafaha-manao azy. Nasongadinay ihany koa ny interface tsotra sy tena fotony izay tsy manaloka ny zavatra niainany akory fa manamora ny fanatanterahana ny filantsika.
Online Hanova Maimaimpoana
Tranonkala iray hafa an-tserasera izay mety hiteraka fikorontananana ny an'ny "afaka" mifandray amin'ny fananana dokambarotra be, satria tena miatrika vahaolana premium izahay amin'ny fizahana mialoha. Eny, marina fa miatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra fandoavam-bola ananantsika an-tserasera izahay, na dia iharan'ny fetra fampidinana sy ireo endrika misy aza ny drafitra aroson'izy ireo hanatanterahana ny fiovam-po tadiavina.
Ataovy ao an-tsaina fa manaraka izay voafaritra ho an'ny ambiny izy, ary izany dia hoe afaka manatanteraka karazana fiovam-po hafa mifandraika amin'ny endrika video, rakitra ary sary. Izany hoe, ankoatry ny fahafahantsika mampiasa JPG na ICO, dia afaka mamadika amin'ny PNG isika, sy ny maro hafa.
Angamba izany ho antsy miaramila Swiss any amin'ny Internet mahatonga azy io ho dinihina hafa hahafahana manova ireo fiovam-po ireo. Farafaharatsiny rehefa mandoa isika dia adinontsika ny fanaovana doka mba hananana fitaovana natokana ho an'ny famadihana ireo sary JPG ho ICO. Anisan'izany ny fiovam-po raha hitady an'ity safidy ity isika. Ny vidiny dia afaka manomboka amin'ny $ 6 ka hatramin'ny $ 11 isam-bolana arakaraka ny drafitra novidianay.
Online Hanova Maimaimpoana - Web
Manohy izany zavatra izany ihany koa izahay avy amin'ny tranonkala iray ahafahantsika miditra mankany amin'ny maridrefy fiovam-po tsara isan-karazany amin'ny endrika (sy efa niresaka momba azy isika taona vitsivitsy lasa izay) ny rakitra sary sy ireo izay tsy toa ny horonan-tsary. Ary na dia maimaim-poana aza ny sasany amin'ireo fitaovany, dia tsy izany mihitsy ilay mamadika ny sary JPG ho ICO.
Manana isika Safidy finday sy birao misy, dia havaozina tsy tapaka ary manolotra encryption ho an'ny fampakaram-pahefana hitandrina sy hilamina. Safidy premium no dinihina satria manana interface tsara voamboatra ary mety hanjary ho solon'ny hafa.
Ary tsy manolotra famandrihana isam-bolana, eto mandoa 7 dolara izahay mba hankafizanao ny fiainanao JPG mankany amin'ny ICO fanovana endrika endrika.
Ary marina vitanay ity andian-tranonkala an-tserasera ity ho an'ny fanovana mahery vaika, na ilay iray manolotra karazana fiovam-po isan-karazany indrindra, satria mitondra antsika amin'ny karazany 1.200 ary afaka manana famandrihana avy amin'ny drafitra telo izahay: Basic, Pro ary Business.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka momba ny mpanova an-tserasera lehibe indrindra amin'ny tranonkala isika ary afaka alehantsika raha toa ka mifanatrika amina endrika endrika hafa isika. Ary i Zamzar no mitondra miasa hatramin'ny 2006, izany hoe mihoatra ny 13 taona an-tserasera hanolotra karazana fanovana endrika, anisan'izany ny CAD. Mazava ho azy, manome ny fanovana ny sary JPG ho ICO tsy misy hatak'andro.
Anisan'ireo hatsaran-toetrany azontsika ianteherana amin'ny fetra farany mampakatra hatramin'ny 2GB, fanohanana endrika maherin'ny 1.100, karazana fiovam-po maherin'ny 1.200, azo alaina amin'ny karazana browser sy fitaovana rehetra, ary mamela anay hiova tsy voafetra isan'andro.
Mazava ho azy fa manana ny maharatsy azy io, nanomboka ny sary dia tsy maintsy sintonina tsirairay ary ny fanodinana sary azy dia kely dia kely isaky ny asa. Ho an'ny $ 9 dia manana ny drafitra ifotoranay ianao, ho an'ny $ 16 ny drafitry ny Pro sy ny orinasa dia hiakatra hatramin'ny 35 isam-bolana.
Fandaharam-pianarana Windows: Converter PNG maimaimpoana ho an'ny ICO
Ary na dia tsy manana ny endrika JPG amin'ny an'ity programa ity aza izahay amin'ny Windows, Manolotra ny fahafaha-mampiasa azy io hampita izany amin'ny ICO izy. Izy io dia programa ho an'ny Windows izay somary ntaolo tamin'ny interface tsara, saingy manampy antsika amin'ny asa tadiavina izy io.
Anisan'ny iray amin'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny fahaizana manondro ho an'ny rafitra iza no tadiavinay ny sary masina ICO, na Android, iOS, Windows, Linux na Mac OS X. Manolotra ihany koa ny mety manampy sary marobe ary koa ampiasao mpanova batch.
Amin'ny ankapobeny dia a mpanova lehibe avy amin'ny sary PNG ka hatramin'ny ICO, ary miaraka hatrany amin'ny fahafaha-mampiasa JPG, GIF, BMP sy ny hafa. Ny zavatra tokana mety tsy hita dia ny ahafahanao manamboatra ny famahana ny sary masina.
marary mitsika - Web
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ireo tranonkala (na fampiharana) tsara indrindra hanovana ny sary JPG ho ICO